HIIT ọ dị mma maka abs? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Hiit abs - ngwọta ga-ekwe omume
Hiit abs - ngwọta ga-ekwe omume
HIIT ọ dị mma maka abs?
Omenala na-eru nso na-agụnye eweli igwe na otu ebe omume n'elu ogologo durations, mgbeAHmgbatị ahụ gbara obere oge ọzụzụ ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ. O doro anya naAHmgbatị na-eleba mọzụlụ ahụ site na ịbawanye ụba ma dị mma maka iwulite yaNgalabana obliques.Ọgọst 18 2018
Kedu ihe na-eme, ndị na-eme egwuregwu ahụ. Ọ bụ Chris Heria. Nabata na isiokwu ọzọ Official thenx.
Taa, anyị ga-eme mgbatị ahụ iji nweta mkpọ isii nke ụlọ, ị chọghị akụrụngwa ọ bụla ma ị nwere ike ịnweta mgbatị siri ike na nke dị adị Lee nsonaazụ nke nkasi obi nke ụlọ gị. Ugbu a, ọ bụrụ na i chere na ọ dịghị mkpa ka ị rụọ ọrụ abs, lee isiokwu m na Why Why Active Do Nke a na-akpọ, Ikwesịrị Workrụ Ọrụ Abs Iji Nweta Mpịakọta isii? Isi gị na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịgbanye, na-agbagharị, na na-agbanwe ahụ gị, yana yana na-enyere aka na mmega ahụ niile. Trainingzụ mọzụlụ afọ gị abụghị naanị na-egbochi mmerụ ahụ, kamakwa ọ na-eme ka arụmọrụ nke arụmọrụ gị niile dịkwuo elu.
Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji emega ahụ ma gbaa abụba n'otu oge bụ site na ọzụzụ ọzụzụ dị oke elu. Also na-agbakwa ọtụtụ calorie na obere oge na mmega ahụ HIIT karịa ụdị mmega ahụ ndị ọzọ dị ka kaadi ala na-adịgide adịgide. Ugbu a, ihe anyị na-eme bụ nke anyị dị n'ime na mpụga mpụta na transverse abs, nke bụ isi nke akwara nke mejupụtara abs gị.
Ya mere, usoro nke taa ga-arụ ọrụ ahụ niile ma tinye ọzụzụ HIIT na mgbatị nke 10 a nke ga-enyere gị aka ịrụ ọrụ gị mgbe ị na-agba abụba n'otu oge, yabụ mgbe ị dị njikere ibido, budata ngwa ahụxx. na Download Storelọ Ahịa ma ọ bụ Playlọ Ahịa Google Play ma ọ bụrụ na ịnweghị. Mepee ebe mgbatị YouTube. Kwesịrị ịchọta usoro a.
Achọrọ m ka ị mepee iji soro m nke ọma. Nke a ga-abụ mmega 10 maka sekọnd 45 nke ọ bụla, yana nkwụsị nke abụọ nke 15 n'etiti iji tinye usoro ọzụzụ ọzụzụ dị elu dị elu. Omume a anaghị achọ ngwa ọ bụla, naanị ihe anyị ga-achọ bụ nkeji 10 nke oge gị na nraranye gị, mgbe nke ahụ gasịrị, a naghị ekwu ọtụtụ okwu, anyị ga-agafe usoro a niile, mgbe ọ dị gị ka ike na-agwụ gị ma ọ bụ na ị na-eche ya Na ị ga-akwụsị oge ọ bụla, adala mbà.
Jiri nwayọ nwayọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọbụlagodi nke abụọ iji nweta ume gị, mana ebumnuche bụ ịgbalị ịghara ịkwụsị n'oge sekọnd 45 ahụ. hisdị mgbatị ahụ na-enye gị ohere ịdị ogologo oge na sekọnd 45 nke ọ bụla mezue mmega ahụ na-enweghị ịkwụsị . Anyị nwere ike ịmalite na nke ahụ.
Mmega ahụ nke mbụ bụ jacks jacks. Na-ejegharị maka sekọnd 45. (egwu obi ụtọ) Otu n'ime ihe kachasị mkpa ị nwere ike ime mgbe ị na-eme ihe omume ndị a maka sekọnd 45 na-achịkwa iku ume gị.
Ka ị na-achịkwa ma na-achịkwa iku ume gị, ogologo oge ị ga-enwe ike iku ume ikpeazụ. Nwere ike ịrụ ọrụ onwe gị site na mgba iku ume. Anyị nọ ebe ahụ.
Ise, anọ, atọ, abụọ, otu. Ọ dị mma, were ọsọ ọsọ nke abụọ jide iku ume gị; ọ bụ ihe omumu izizi iji kpoo ahụ gị niile wee mee ka obi gị na-aga. Na ọzọ omumu anyị na-agba ịnyịnya ígwè.
Anyị na-Ọ Ọ na-aga na ala na ugbu a, anyị na-etinye ndị ọzọ mesiri ike na abdominal mọzụlụ. Anyị ga-emetụ ikpere aka na ikpere, na-agbatị aka ikikere na ikpere. (Obi ụtọ dị egwu) Ọtụtụ n'ime ihe a na-adịwanye mfe ka ị na-amụta ịhazi iku ume gị na ihe m na-ekwu, na-eku ume site na imi gị ma na-ekupụ n'ọnụ gị ma gbalịa ka ị ghara iku ume ngwa ngwa kama na-eku ume na sekọnd abụọ ahụ ma na-eku ume si ugboro abụọ na. (Joy music) Ise, anọ, atọ, abụọ, otu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, n'ihi na edeziwo m iku ume m, anaghị m agbanye gas mgbe m gbagharịchara maka sekọnd 45. Ihe omumu anyi ga - eme bu ikpere di elu. Omume a ga - emekwa ka anyị rụọ ọrụ anyị.
Ya mere, ka anyị gaa maka sekọnd 45. Chọrọ ikpere ikpere gị aka metụ ikpere gị. Wan chọrọ ikpere gị (Joy music) Cheta, mgbe ị na-amalite ịmalite ị na-ewepụ ikpere gị na ọkwa dị oke ala, mana ebumnuche bụ iji bulie ihe niile elu na elu.
Dị ka ihe mgbawa dị ka ị nwere ike. (Egwu di egwu) Ka anyi jee. Ise, anọ, atọ, abụọ, otu.
Ọ dị mma, ị kwesịrị ịmalite na anyị nwere obi ụtọ ugbu a. Anyị ga-alaghachi n’ala, anyị ga na-arụ ọrụ anyị na-arụ ọrụ nke ọma yana abs na mmemme a na-esote akpọrọ Russian Twist. Ya mere, ịchọrọ idebe ụkwụ gị dịka o kwere mee, site na hips gị na mkpịsị ụkwụ gị, metụ otu akụkụ, metụ aka nke ọzọ, wee gbagọọ nsị gị oge ọ bụla. (Obi ụtọ na egwu) Ọfọn, ọ bụrụ na nke a esiri gị ike, ịnwere ike ikpere ikpere gị.
Ọ ga-adị mfe karị. Ma ọ bụrụ na ị nwere nke gị. mee ka ụkwụ kwụ ọtọ, ka ụkwụ gị na-aga na ahụ gị, ka ị na-eji mọzụ afọ gị.
Ya mere, mee ka ụkwụ gị guzozie ka o kwere mee. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ahụ. Ise, anọ, atọ, abụọ, otu.
Anyị na-a abụọ na-ume. Nke a bụ oge kachasị mkpa. Bido belata iku ume gị, ị ga-enwe ike iku ume gị ma gaa n'ihu na usoro a.
Omume ọzọ anyị ga - amalite ga-abụ ịrị ugwu ugwu anyị ga - abanye n'ọnọdụ nkwalite. Na-ebute ikpere gị, ikpere elu I nwere ike ime ikpere gị ọtụtụ ugboro. Cheta, ọ bụrụ na ike gwụ gị, ị nwere ike belata oge ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike na-agba ọsọ na oke ike.
Ihe ndị kachasị mkpa ị gaghị akwụsị. (Egwu di egwu) Ka anyi jee. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ahụ. (Obi ụtọ dị ụtọ) Ise, anọ, atọ, abụọ na otu.
Odi nma, ka anyi dina n’azu anyi. Omume ọzọ anyị ga - eme bụ ịkwalite ụkwụ na ị ga - achọpụta na anyị niile na - akụ akwara dị iche iche na enweghị anyị. Ya mere, ka anyị gaa n’ihe omumu ọzọ a.
Tinye ụkwụ na-ebuli elu. Tinye aka gị niile, hụ na ịchebe ụkwụ gị niile na ala. (Obi ụtọ dị ụtọ) Ise, anọ, atọ, abụọ, otu.
Odi nma, were obere ezumike. Omume na-esote anyị na-abanye, n'ime na ịpụ, meghee ma mechie. Anyị ga-alaghachi azụ na ọnọdụ ị na-ebugharị ma anyị ga-awụlikwa elu n'ụzọ niile, ụzọ niile si, ụkwụ meghere, ụkwụ mechiri, mana na ọsọ gị. (Egwu obi ụtọ) Ọ fọrọ nke nta ka anyị nọrọ ebe ahụ.
Gaba n'ihu. (Obi ụtọ dị egwu) Ọ bụrụ na ijide. Ise, anọ, atọ, abụọ, otu.
Ezigbo ụmụ okorobịa, sh aga m emejupụta ya ugbu a. Anyị na-aga mmega ọzọ na ọnọdụ plank. Anyị na-eje ije plank site n'akụkụ ruo n'akụkụ ma lekwasị anya na nnwere onwe zuru oke nke ịgagharị.
Ya mere, ị banye na plank, ị na-akwagharị hips gị n'otu akụkụ, gbadaa n'akụkụ nke ọzọ, ka anyị gaa. (Upbeat music) Lekwasị anya n'àgwà nke njikọ aka gị na nbudata gị na ngwa ngwa ị na-aga na mgbatị a. Ka a pụọ.
Ise, anọ, atọ, abụọ na otu Ọ dị mma, anyị emechaala. Anyị na-aga ihe omumu a, na-eme kpakpando. Ya mere, anyị ga-ewere ọdịdị nke kpakpando ahụ.
Ga-arịgo, metụ otu nkwonkwo ụkwụ, gbadata, metụ ọzọ nkwonkwo ụkwụ. Ka a pụọ. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ. 10 sekọnd ọzọ.
Ise, anọ, atọ, abụọ na otu. Ọ dị mma, oge iji kwụsị usoro a. Anyị na-agba ikpere dị elu.
Omume ikpeazụ ga-eme ka ike gwụ gị. Achọrọ m ka ị nweta ihe niile i nwere. Anwala ịkwụsị n'agbanyeghị ihe ọ bụla.
Ka anyị gaa maka sekọnd 45. (egwu dị egwu) Yabụ na ị nwere ya. Nkeji 10 wuo mkpọ isii gị ma gbaa abụba n’enweghị ihe ọ bụla.
Yabụ ọ bụrụ na ị gafere m na ụkwụ mbụ m ọ bụ ihe ịtụnanya ma ọ bụrụ na ị ga-akwụsịtụ ole na ole n'ụzọ ahụ, adala mbà n'ihi na n'ikpeazụ ka ị na-eme nke ahụ, ka ị na-azụkwu otu ahụ, ọ na-akawanye mfe . Will ga-enwe ike ịme ọ bụla mmega ahụ maka sekọnd 45 ma mgbe ahụ ị ga-amalite n'ezie ịhụ ezigbo nsonaazụ na n'ikpeazụ ị ga-enwe ike ịme nke a maka mgbatị ndị ọzọ na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe m chọrọ ka ị mee. Nke mere na mgbatị ahụ a kachasị dị irè ma na-enweta nsonaazụ kachasị.
Ikwesiri ime nke a ma ọ dịkarịa ala okpukpu atọ ma ọ bụ anọ karịa nke oriri na-edozi ahụ; ị ga-enwe nnukwu mkpọ siri ike, isii siri ike ngwa ngwa. Yabụ, ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, kpachara anya na ị ga-akụtu bọtịnụ Dị ka, hapụ okwu n'okpuru, mee ka m mara ihe isiokwu na-esonụ ga-eme ma denye aha ma ọ bụrụ na i mebeghị ya n'ihi na anyị ga-eziga kwa ụbọchị ọ bụla Sọnde 8: 00 elekere
USA oge adighi anya. Ma ọ bụrụ na ị kwuo okwu n'ime nkeji iri atọ mbụ nke bulite, ị nwere ohere iji merie n'efu Ngwa ngwa ngwa Ọ bụrụ na ị ka maara onye ọ bụla na-anwa imega ụlọ, gbaa mbọ kesaa enyi gị n'isiokwu a wee laghachi n'isiokwu ahụ kwa izu iji jide n'aka na ị na-emega ahụ ma na-esure abụba n'otu oge kwa izu. Maka mmega ahụ ndị ọzọ dịka nke a ga-eme ka ị nwee ụdị ndụ kachasị mma, banye na Thenx.com wee bụrụ onye otu.
Inweta usoro mmemme ọzụzụ anyị niile n'ụzọ zuru ezu, usoro nduzi na mmemme ụbọchị niile ga-azọpịa gị. Ma budata ngwa ahụ ngwa ngwa site na thelọ Ahịa iji were mgbatị ahụ a na mgbatị anyị niile soro gị gaa ebe ọ bụla ị gara ma sonyere ọtụtụ nde ndị ọzọ na-agba ọsọ na-agba agba gburugburu ụwa ndị nọ n'ọnọdụ kacha mma nke ndụ ha. Iji hụ ọtụtụ ọdịnaya m n'izu ahụ denye aha na blọọgụ blọgụ m nke bụ youtube.com/chrisheria ma soro m na Instagram nke bụkwa Chrisheria nwee ọ itụ na ya wee gbaa mbọ hụ na ị soro m na SoundCloud.
Ana m ebipụta egwu ọhụrụ m ebe ahụ. I nwekwara ike ịchọta egwu m na nyiwe ndị ọzọ dịka Spotify, Apple Music, Tidal na ndị ọzọ niile. Lee gị na Sọnde na-abịa elekere asatọ nke ụtụtụ.
Oge Ọwụwa Anyanwụ USA, ịhụnanya m, udo.
Ọ bụ cardio ma ọ bụ HIIT ka mma maka abs?
N'ime ọmụmụ ihe, isiokwu ndị mere abụọAHmgbatị na abụọ otu ebekadiommega kwa izu idaỌzọsentimita asatọ site n'úkwù ha naỌzọabụba n'ozuzu ma e jiri ya tụnyere ndị na-eme omenalakadio. Igodo nke dọwaraNgalababụ imefu abụba. Mechie oge ọzụzụ gị na minit 10-15 nkeAHma ọ bụ ịgba ọsọ.
HIIT ọ dị mma ịhapụ abụba afọ?
N'ihi naAHọzụzụ nwere ike ime ka ọnụọgụgụ ahụ gị na-agbari calorie, ọ bụ usoro ọzụzụ kachasị mmaọkụn'ozuzu aruabụba, gụnyereafọ abụba. Otu nnyocha gosiri na ndị mmadụ na-arụ ọrụAHugboro atọ n'izu maka nkeji iri abụọfuru efunkezi nke 4.4 pound na izu 12 na-enweghị ihe ọ bụla dietary mgbanwe.Eprel 7 2021
Welcome to Episode 2 Otu esi atụfu ibu na afọ abụba site n’enyemaka nke sayensị Nkebi nke 1 Anyị elegoro anya na nri nri Nkebi nke abụọ Anyị lere anya n’omume dị mfe onye ọ bụla nwere ike ime n’ụlọ iji mebie ahịrị eriri ahụ na mgbe anyị kpọkọtara mmadụ abụọ ọnụ ihe nsonaazụ kwesịrị ịbụ ihe ịtụnanya ugbu a, ma ị sitere na mbido mbụ nke Ọnwụ Ibu ma ọ bụ naanị na-achọ mmega ahụ wee pịa isiokwu a. Obi dị m ezigbo ụtọ na ị nọ ebe a n'ihi na ị kpebiri na ị chọrọ ime mgbanwe, ị kpebiri na ị ga-enwe ahụ ike ma kpebie ị chọrọ uru ahụ ike yana dịka m kọwara na isiokwu m gara aga, ị hụrụ abụba, ọ bụghị naanị sentimita asatọ Anyị tuo ị ga - ahụ nke a mara dịka subcutaneous abụba, ma n'ezie Ize ndụ bụ abụba dị anyị gburugburu na n'ime abụba abụba gburugburu anyị akụkụ a maara dị ka visceral abụba. Ugbu a, anyị maara na nnukwu abụba visceral na-etinye anyị n'ihe ize ndụ maka ọrịa obi, na-etinye anyị n'ihe ize ndụ maka ụdị ọrịa shuga 2, yana ụmụ nwanyị. Achọpụtala na ị nwere nnukwu ọrịa cancer ara.
Biko zere itinye aka gị n’azụ isi gị mgbe ị na-anọdụ ala na maka mmemme niile a na-amụ, ndị sonyere mere ụzọ atọ nke iri, yabụ gbalịa ime nke a ma ọ bụ wulite onwe gị elu, anyị adịla ọkara, yabụ na-esote anyị nwere ikpere dị elu, gbadaa ala ma ọ bụ gbuo ikpere gị ma mee ka ụkwụ gị bilie ma gbalịa imetụ ikpere aka na ikpere gị na-edobe aka gị n'akụkụ isi gị na ịpị afọ gị mgbe ikpere gị metụrụ ikpere gị ị ga-eme nke a ọzọ Achọpụtara m na mmega ahụ na - esote ọ ga - adị mfe ma ọ bụrụ na ọ bụ ụdị mmega ahụ ọ na - ezu ike ma ọ bụ ya bụ crunch bụ nke dina n’ala, gbuo ikpere gị, tinye aka gị n’akụkụ isi gị. Ugbu a jiri nwayọ kpughee nsị gị ma weta ubu ubu gị n'ala. Kwesịrị ijide n'aka na ubu gị dịpụrụ adịpụ n'ala ka mmega ahụ wee dị irè .Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ntakịrị nguzogide mmega ahụ a, ị nwere ike ime crunches ụkwụ-ụkwụ kama ma ọ bụ dị ka ihe ọzọ.
Jide n'aka na ị gbanwere n'akụkụ ọ bụla iji jide n'aka na ị na-arụ ọrụ n'akụkụ abụọ ma ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ na nke a ma ọ bụ nkwụsị nke na-agbanye ụkwụ ga-enyere aka na mbido ma mechaa bụrụ oge maka azụ azụ, nke a makwaara dị ka Superman. Ebumnuche nke mgbatị ahụ bụ ịrụ ọrụ akwara azụ gị mgbe ị mechara mmegharị afọ, yabụ dina ala n'ala mgbe ị na-agbatị aka gị na ụkwụ gị ma jiri nwayọ bulie obi gị na ụkwụ gị n'ala mgbe ị na-eme nke a. azụ, jiri nwayọ wedata ya n'ala maka usoro 3 nke 10, nke ahụ bụ ngwụsị nke mmemme ahụ wee biko cheta, ọ bụrụ na ị na-eme ha nke ọma, ị nwere ike ịtụ anya ịme ha n'ime opekata mpe izu isii Loshapụ 2 sentimita asatọ site n'úkwù gị. , nke bụ ihe magburu onwe, ma ọ bụ na-adịghị mma dị ka nri akara otu anyị na-ekwu banyere ihe na nwunye na-atụfuru ma? Ha tufuru kilogram 0,5 na 1 kwa izu ma mgbe izu isii gachara, ha tụfuru 5 centimeters n'úkwù na nke ahụ bụ n'ihi na ndị sonyere na-eme mmegharị afọ ahụ, ya bụ, emeghị mgbanwe nri ọ bụla, ọ bụ naanị meziwanye akwara ụda ha, na bụ, site na imeziwanye akwara ahụ, ahụ gị nwere ike ijide abụba ka mma.
Nke ahụ pụtara na ị naghị efufu abụba n'ezie, mana ahụ gị na-ejide abụba ahụ nke ọma, yabụ, ọdịdị nke eriri akwa ahụ ka mma, yabụ mbelata centimita abụọ, ọ bụ ya mere o ji dị oke mkpa na ị naghị edozi afọ. crunches Ọnwụ ibu ma ọ bụ abụba afọ ee anyị maara site n'ọmụmụ ihe mgbe izu isii gachara. Ihe ndị a na-arụ ọrụ afọ, enwere mbelata centimita abụọ, mana maka oke mmetụta ị ga-eme mgbanwe nri m kọwapụtara na nke mbụ, m ga-ahapụrụ gị njikọ gị ebe a na nkọwa dị n'okpuru ma ọ bụrụ na ị hụbeghị isiokwu a ma cheta ma ọ bụrụ na ị na-eri nri ị nwere ike ida 0,5 na 1kg kwa izu nke dị ịtụnanya mana Nke a bụ ụfọdụ akụkọ ka mma; ọmụmụ ihe ahụ gosikwara na mgbe izu isii gachara, ndị mmadụ belatara abụba visceral ha, abụba dị ize ndụ nke na-etinye gị n'ihe ize ndụ nye ọtụtụ v Ọnọdụ ahụike dị iche iche mụbara Ọfụma, isiokwu ndị ahụ nwere mbelata abụba visceral ha site na ihe dịka 14% nke dị ịtụnanya na ha nwekwara nwere mbelata na cholesterol ha, ha na-ebelata ọbara mgbali ha ma mgbe izu isii gasịrị, úkwù ha na-ebelata site na centimita ise, nke ọzọ dị ịtụnanya, ugbu a maka echiche nke abụọ ma ọ bụrụ na ị gbanwee mgbanwe nri site na ihe omume 1 ma jikọta ya na omume anyị mụtara taa, nsonaazụ ndị a kwesịrị ịbụ ihe ịtụnanya ma biko echefula na anyị bụ ndị toro eto ga na-azụ ọzụzụ oge niile, yabụ kedu ihe nke ahụ pụtara na anyị ga-eme 150 nkeji nke ọzụzụ na-agafeghị oke kwa izu ma ọ bụ 75 nkeji nke ike ọzụzụ kwa izu.
M ga-ahapụ ozi ndị ọzọ na nke a na nkọwa dị n'okpuru ebe a maka gị na mmega afọ gị ga-abụ akụkụ nke ya na-enye aka dabere na ike na mgbe ahụ ihe anyị na-enweta nri ọ bụla ọ bụ ezigbo echiche mgbe niile ịlele ọnọdụ ibu gị dị ka ị nwere ike adịworị na ahụike dị mma ka ị ghara ịchọ ifelata ugbu a. Easiestzọ kachasị mfe iji lelee nke a bụ site na iji igwe okwu BMI m ga-ahapụrụ otu njikọ na nkọwa dị n'okpuru maka gị ihe niile ị na-eme itinye aka n'ịdị elu gị, ịdị arọ gị na okike ya ma ọ ga-agbakọ ya wee kwuo nke gị Ibu ọkwa dị nnọọ apụ. Biko chetakwa na amaara m na mkpụrụ ọgwụ nri na-enwetaghị ikike nwere ike iyi ka ọ bụ ihe ngwọta ick-fix, mana biko cheta na amaghi ọdịnaya dị na ya, na-egosighị ya na nke a na-enyochabeghị n'ihi nke a, mmadụ abụọ na mmadụ atọ kọọrọ nsogbu dị egwu nke mere biko nọrọ na nchekwa, nọrọ pụọ n'ebe ha nọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya Edere m otu isiokwu maka MHRA n'oge na-adịghị anya na m ga-ahapụrụ gị njikọ gị ebe a na nkọwa dị n'okpuru ebe a lee anya nweere onwe m ma enwere m olileanya na ndụmọdụ m enyerela gị aka N’isiokwu a n’izu a.
Biko mee ka anyị mata otu ị si eme site na ịhapụ okwu n'okpuru ma ọ bụrụ na ịnwere nke ọ bụla nke aka gị biko hapụkwa okwu n'okpuru n'ihi na m ga-enwe mmasị ịgụ ya ma ejiri m n'aka na onye ọ bụla na-ahụ isiokwu a, ịgụ ya kwa ga-abụ mgbe niile cheta na ị di uku ma hu gi n’izu na abia iji tufue sentimita abuo n’apata obi ya na akara aka ahu mgbe ufodu ogugu a adighi aru oru, o di ka ngbanye injin, mgbe ufodu mmiri iru mmiri adighi nfe na mkpisi aka ya inweta Ọ dị mma pịa ụda ee nsogbu ụwa mbụ, m ga-agwa gị ugbu a, enwere m ihe nkiri ụbọchị ọjọọ taa m kwuru ihe niile na-ezighi ezi, enweghị m ike icheta ahịrị m ma ọ siri ike ikwu eziokwu na kọfị a Alex mere m m laghachiri ndụ m juru m anya Ọtụtụ neatly mere idaha Ime ihe n'eziokwu, a idaha m nnọọ mere ka jikota mmega ahụ na nri na nri eziokwu na dị ka m kọwara na m ikpeazụ isiokwu, lee abụba gị, ọ bụghị naanị tuo anyị bụ (ochi) tuo anyi puo tuo anyi tuo oka y, ọ bụ ihe ịtụnanya, enwere ezigbo mmetụta na mmetụta uche na-agagharị ka ịgwa m ihe ị chere maka ihe nkiri a, Nadia, ikekwe tinye timestamp ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ ka ndị na-ekiri nwere ike ịlaghachi azụ ma gwa anyị ihe ha chere na nke ahụ niile dị nnukwu ndị nduzi ị maara Scorsese mgbe ị na-ele youtube dị ka isoro gị rụọ ọrụ ma nwee onye ọrụ gị Ian Plummer ị nwere ike niile Dome azụmahịa Hey ụmụ okorobịa, daalụ maka ilele edemede nke izu a, pịa ya dị ka nke a ma ọ bụ Idenye aha Ugbu a iji soro ihe ọhụụ isiokwu kwa izu
Nkeji 30 nke HIIT n'ụbọchị zuru?
Maka ọtụtụ, a30-nkeji HIITmgbatị bụ ezigbo nnọkọ ogologo. Ọ bụrụhaala na ị na-agbaso usoro nke oke ike soro izu ike ị nwere ike ịnụ ụtọ uru nkeAHna ukwuu mkpumkpu sessions - i nwere ike ịgụ ihe banyere n'ụzọ dị ịrịba ama dị mkpirikpiAHnnọkọ ebe a.Mar 22 2021
Kedu ihe na-eme n’ahụ gị mgbe ị na-emega ahụ minit 30 kwa ụbọchị? Ọ na-esiri ike ịmanye onwe gị ịga mgbatị ahụ ma mee ihe niile ahụ, mgbatị na mgbawa, mana imega ahụ esighi ike dịka ị nwere ike iche na mmega ahụ kwa ụbọchị ga-ezu iji mee ka ahụ dị gị mma na ka ị dị na mgbe ị na-eche oke ike nke mgbatị ọ bụla na-ahapụ gị ma hụ nsonaazụ mbụ, ị ga-ahụ adịghị ike n'ime obi gị maka mgbatị ahụ. Ka anyị leba anya n’ihe ị ga-atụ anya n’ahụ gị mgbe ị mechara banye ma bido imega ahụ. You mara na mmega ahụ oge niile nwere ike ime ka ndụ gị dị ogologo.
Lelee isiokwu iji chọpụta uru ndị ọzọ dị ịtụnanya nke imega ahụ kwa ụbọchị Kwere anyị mgbe ị lechara isiokwu a, ị ga-ahụ ọzụzụ na ọkụ ọhụrụ n'oge ọzụzụ.Usoro gị na-agabiga ọtụtụ usoro.Ọnụ ọgụgụ mgbanwe nke mkpụrụ ndụ gị na-abawanye. kalori, nke bụ ya mere ọtụtụ ndị ọkachamara na-atụ aro ka ị ghara iji nlezianya na onwe gị na-eri pizza ma ọ bụ otu achicha ma ọ bụrụ na ịchọrọ, mana na-eme obere mmega ahụ n'oge mgbatị gị ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-emebu.
Ọkpụkpụ ọbara gị ga-akawanye mma-nke a metụtara ma mmegharị ahụ ma nke dị arọ. Razụ ọzụzụ na-eme ka uto nke arịa ọbara ọhụrụ na-abawanye ma na-eme ka ikuku oxygen na-agbapụta site na lita 8 na-emebu na-ezu ike na 100 lita kwa nkeji. n'oge mmega ahụ na sistemu gị ọzọ chọrọ ikuku oxygen iji gbaa calorie ume nke ọma.
Nrịbawanye ọbara na-enyere mkpụrụ ndụ aka ịnarakwu oxygen ma na-azụkwa onwe ha site na ọbara, ọ na-enwekwa mmetụta dị mma na ụbụrụ gị. Sel na - arụ ọrụ ha nke ọma, yabụ ọ bụrụ na ị na - emega ahụ ma ọ dịkarịa ala obere ụtụtụ, ọ na - enyere aka ngwa ngwa ịdị na - elekwu anya ma na - amụ anya Onye ọ bụla maara mmetụta a mgbe ọ gachara ezigbo mgbatị ahụ, mgbe ike gwụrụ gị ma n'otu oge ahụ ihe ịtụnanya dị ike n'oge a ụbụrụ na-amalite ịhapụ ọzọ endorphins wham na-ebuli ọnọdụ gị Endorphins na-ebelata ihe mgbu n'ihi na ha nwere ndị nnabata pụrụ iche na-arụ ọrụ ụbụrụ gị, ha nwekwara ọtụtụ mmetụta ndị ọzọ dị mma na ahụ na uche gị ha na-enyere aka imeri ahụ riri ahụ ọgụ na ịda mbà n'obi ma melite usoro ahụ gị niile. na-amalite ịgbanye protein na carbohydrates ugboro anọ ngwa ngwa ka ị ghara ibu ibu ngwa ngwa ị maghị etu ị dị, ọ ga-aga mgbatị ahụ ugbu a na otu ihe dị mma ị nwere ike ime ozugbo mgbatị gị bụ mmiri oyi. n'ụzọ dị otú a, ị ga-ebelata ohere ị nwere mgbu awa ole na ole n'ụtụtụ echi ma ọ bụ n'oge mgbatị gị ọzọ mgbe ị gachara mgbatị oge ole na ole ị gachara ọzụzụ, ọbara mgbali gị na-edozi na y ị chọpụtawo na ị nwekwu obi ike onwe gị mgbe ị zụsịrị ọzụzụ na ùgwù onwe gị na-akawanye mma, mmetụta na ị nwere ike ime ihe ọ bụla na mkpali gị na-abawanye, ọ bụghị ihe ijuanya na ị ka lanarị ọtụtụ crunches na osisi Lunge nzọụkwụ ọ bụla ọ na-eme ka ụbụrụ gị dị nkọ. ma nyere gị aka ịrụ ọrụ nke ọma, ị malitekwara ihi ụra nke ọma karịa ka ụra ụra gị na-eme ka ị daa ụra ngwa ngwa ma teta n'ike n'ike ugbu a ị nwere ike ichefu ọtụtụ mbọ a na-apụghị ịgụta ọnụ imeghe anya gị n'ụtụtụ ị ga-enwe ahụ iru ala ma dịkwa njikere ịmalite ụbọchị nke ọma na ị ga - adịghị mkpa bọtịnụ ụra dị ka ị gaghị eche na ị ga - eche ọnwa iji hụ mgbanwe mgbanwe mbụ dị mma na - eweta na ndụ gị ị nwere ike ịnwe obere mmụba mgbe awa ole na ole gasịrị, mgbe ole na ole gasịrị izu nke mmega ahụ, mmega ahụ kwesịrị ekwesị ji nke nta nke nta mee ka obi gị na arịa ọbara gị dịkwuo mma na-amalite ịrụ ọrụ nke ọma, ikike ume gị na-akawanye mma, na-eduga na mmụba zuru ezu na ntachi obi gị, ka ị na-agba cise mgbe nile ị ga-echefu ihe dị ka mkpụmkpụ nke ume nke bụkwa uru nke nnukwu akpa ume na-ekwu okwu banyere mgbanwe ndị ọzọ dị ukwuu n'izu nke mmega ahụ na-eduga n'ọbara ọbara haemoglobin Ọbara ga-emekwa ka ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ndụ ọbara uhie kwa ọbara kwa cubic millimeta mụbara site na nde ise rue nde isii nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ga-adị elu karịa, ogo lymphocyte dị n'ọbara ga-abawanye, nke ga - enyere ahụ gị aka ịlụso nje na nje dị iche iche ọgụ ọsọ ọsọ ma rụọ ọrụ nke ọma na ahụ gị na - achịkwa, n'etiti ihe ndị ọzọ, ogo shuga na ihe ndị ọzọ dị n'ọbara n'ụzọ dị mfe kachasị ihe kachasị mma bụ na ahụ gị na-echekwa obere abụba na mgbakwunye ọzụzụ oge niile na-eme ka ike gị sie ike, sie ike ma sie ike karịa, ọ naghị emetụta gị mgbe ọnwa ole na ole nke ọnwa ọzụzụ oge niile nke usoro ọzụzụ gị ọkwa dị iche iche kpamkpam, ikuku oxygen na-abanye na mọzụlụ gị na-abawanye ma microcirculation na-emeziwanye, mmịba ọbara na nke abụọ, nhazi ion nke mmegharị gị na-emeziwanye, nke na-enyekwara gị aka ime ka usoro ụjọ gị sikwuo ike, ọsọ nke akwara na nkesa na-abawanye, nke na-eduga na mmelite nke ụbụrụ ka ị nwee ike ịme mkpebi ngwa ngwa ma gharakwa ịla azụ ma nwee ụjọ. Ọ na - emekwa ka ahụ ike nke mọzụlụ gị dị ike ka ọkpụkpụ gị wee baa ụba, ị gaghị enwe nchekasị ma nwekwaa ike ịda mba na nkụda mmụọ.
Imega ahụ na-agbanwekwa agwa gị nke ọma. Ikwesikwu ike ma sie ike. Maka ụfọdụ ndị, mgbatị ahụ oge niile na-aghọ ọgwụgwọ.
Ọ na - enyere aka ịhapụ mmetụta uche siri ike dị ka ihe mgbu na iwe ma mee ka uche pụọ na nsogbu niile na echiche ọjọọ na ụdị ndị a nwere ike ịnagide nsogbu dị ịtụnanya n'ihi na ọ na - eme ka ị sie ike n'ụzọ anụ ahụ na n'uche, ma ọ bụrụ na ọ dị ka ọ dị egwu na mbụ, ọ bụla mgbatị ahụ na-esighi ike ma bụrụ ihe na-atọ ụtọ karịa afọ ole na ole ị na-emega ahụ oge, ewezuga ihe ndị doro anya kemgbe ọtụtụ afọ ọzụzụ na mmega ahụ na-eme ka usoro gị dịkwuo mma ma mee ka ị dịkwuo mma, ha na-eme ka ndụ gị dịkwuo elu. Ọ bụrụ na ị bụghị nnukwu onye mgbatị ahụ, ị ​​ga-ahụ ihe ọ bụla ị hụrụ n'anya, dị ka ịgba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ọbụna mepụta usoro mmemme gị nke ịchọrọ ma ọ bụ ọbụlagodi ịnagide ma ọ bụrụ na ịnweghị mkpali ọ bụla ma nwee obi ụtọ na ị nwere enyi nwere ike ịdọnye onwe ya na ọzụzụ. ou nwere ike ịnwale ịga mgbatị ọnụ iji kpalite ibe gị.
Ọzụzụ You na-anọ na-eto eto ọ bụla na-achọghị nke ahụ, na ọbụna ihe ndị ọzọ dị ịtụnanya na-adịbeghị anya egosiwo na mmega ahụ kwa ụbọchị na-ebelata ịka nká nke na-ada ụda egwu ugbu a, mana bido ma kwere anyị, ọ bụrụ na ị hụ ihe dị iche, ị meriri ' na-akwa ụta, nke na-enyere gị aka ịkpali mgbatị ahụ yana kedu ka ị si eme Tellus ugboro ole ị kwuru n'okpuru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu ndị ọzọ dị ka nke a, pịa bọtịnụ dị n'okpuru isiokwu a ma kesaa ya na ndị enyi gị ma sonyere akụkụ dị Mma
Nkeji 15 nke HIIT ezu?
Ọfọn, NHS na-ekwu na iji nwee ahụ ike, ndị toro eto nọ n’agbata afọ 19 na 64 kwesịrị ime opekata mpe 150Nkejinke agafeghị oke - ma ọ bụ 75Nkejinke ike - aerobic ọrụ na ike ọzụzụ a izu. Ihe siri ike pụtara ọzụzụ siri ike (AH) - nke pụtara nke ahụNkeji 15otu ụbọchị na-arụ ọrụ, mana ọ bụrụ na ị na-agbasi ike.29.08.2018
igwe kacha agba ọsọ
Nwere ike ịnweta mkpọ isii na HIIT?
Ọzụzụ dị elu nke oge dị elu, ma ọ bụAH, bụ ụdị mmega ahụ nke na-agụnye ịgbanweru mmebi ahụ siri ike na oge mgbake dị mkpirikpi.AHna-eme ka obi gị dị elu ma na-abawanye abụba ọkụ. Na-agbakwunyeAHn'ime usoro gịnwere ikembo mbuli ọnwụ na-eme kaọ dịkarịrị mfe karịnweta isii-tinye abs.18.06.2018
Kwesịrị ịmalite ma ọ bụ kwụsị na HIIT?
Nchoputa ihe omumu a gosiputara na, oburugịAchọrọ ịkwuzuo oge gị, gbalịsie ike na nke mbụ, mgbe ahụimechajiri ike ọzụzụ na-akwali ya.
Kedu ihe kacha mma maka abs?
Ihe ndị dị ka ịgba ọsọ, ịga ije, ịnyịnya ígwè, igwu mmiri ma ọ bụ itinye aka na egwuregwu kachasị amasị gị bụ ụzọ ole na ole dị mfe iji kwadokadion'ime ụbọchị gị. Nnyocha na-egosi nke ahụkadiommega ahụ nwere ike belata abụba afọ, nke nwere ike inyere gị aka ịnweta mkpọ isiiNgalaba.June 18. Ọkt 2018
Hiit ọ ka mma karịa kadio?
AHdoro anyammana-ere ọkụ calorie ma na-enyere gị aka ịkwụsị pound na-achọghị. Ihe kachasị kpatara ya bụ ụdị mmega ahụ nke anaerobic. Ọ na-agbakwa calorie ndị ọzọkarịa kadịma n'oge omumu ma mgbe emechara ihe. Ọ pụtara n'ụzọ doro anya na ahụ gị na-aga n'ihu na-ere calorie ọtụtụ awa mgbe mgbatị gị dị elu gafere.
Ogologo oge ole tupu ịhụ nsonaazụ site na HIIT?
Maka ihe kacha mmaHIIT tupuna mgbeNsonaazụ, ị kwesịrị ị na mezue mgbatị dị ka nke a a ugboro ole na ole kwa izu. Naanị otu ọnwa, ị ga-enwerịrị ikeleemmalite nke ụfọdụ kpakpandoNsonaazụ. Mgbe otu ọnwa ma ọ bụ ụbọchị 30 nke mgbe niileAHmgbatị ahụ ntachi obi gị ga-akawanye mma nke ukwuu.Ọnwa Ise 15, 2020
Kedu ihe ị kwesịrị ịma gbasara ABS HIIT?
A na-ewere mgbatị ahụ Abs HIIT dị ka usoro nke ga-ejikọta ab ma ọ bụ isi omume a kapịrị ọnụ a tụkọtara na etiti oge ka ike wee dị elu. Ga-arụ ọrụ ma zuru ike maka oge ụfọdụ.
Kedu ihe kacha mma oge 15 nkeji HIIT AB?
Gbalịa mee ihe a oge 15 nkeji oge HIIT. 1. Ugboro abụọ: Gaa n’iru dinara ala. Mee isi gi ma gbue ikpere gi na ikpere aka gi. Kpọkọta ha ọnụ, ma mee ka ahụ gị dịkwuo elu n'ekweghị ka ogwe aka gị ma ọ bụ ụkwụ gị metụ ala. Debe ya ka ọ gaa otu nkeji zuru ezu.
Nwere ike ịme mgbatị ahụ HIIT n'ụlọ?
Ee, ị nwere ike. N'ọtụtụ ọnọdụ, mgbatị ahụ ab HIIT ga-enwe ma ọ dịkarịa ala mmega ahụ 2-3 ma ọ bụ karịa nke a ga-arụ otu na ibe ya, mgbe ị na-arụ ọrụ maka oge ụfọdụ, oge ezumike ga-esochi.